Laacibka Afrika ee BBC-da oo maanta la shaacinayo - BBC News Somali
Laacibka Afrika ee BBC-da oo maanta la shaacinayo
11 Disembar 2015
Waxaa gelinka dambe ee maanta shaaca laga qaadi doonaa ciyaaryahanka ku guuleystay abaalmarinta BBC ee cayaaryahanka ugu wanaagsan sanadkan Afrika.
Saddex ka mid ah shanta ciyaartooy ee sanadkan u tartamaya abaalmarinta ayaa rajeynaya in ay markii labaad ku guuleystaan, waxaana ka mid ah ninka sanadkii hore ku guuleystay ee u dhashay dalka Aljeeriya, Yacine Brahimi, kaasoo sanadkan si wanaagsan ugu dheelay kooxdiisa FC Porto.
Sidoo kale waxaa mar labaad inuu abaalmarinta helo doonaya laacibka kooxda Swansea, Andre Ayew, oo xulkiisa qaranka ee Ghana gaarsiiyay fiinaalka koobka Qaramada Afrika ee 2015-ka.
Yaya Toure oo u dheela kooxda Manchester City iyo xulka qaranka ee Ivory Coast ayaa isna doonaya in markii labaad uu helo abaalmarinta, waxaana bishii February uu xiriirka kubadda cagta qaaradda u magaacabay ciyaaryahanka sanadka.
Pierre-Emerick Aubameyang oo u dhashay dalka Gabon ahna weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ayaa ka mid ah ciyaaryahannada abaalmarinta u sharraxan, waxaana uu sanadkan goolal badan u dhaliyay kooxdiisa.
Laacibka Senegal u dhashay ee Sadio Mane ayaa markii ugu horreysay kusoo biiray tartanka abaalmarintan, waxaana uu saameyn weyn sanadkan ku yeeshay guulaha ay gaartay kooxdiisa Southampton, asaga oo u dhaliyay saddexdii goo lee ugu degdega badnaa taariikhda horyaalka Ingiriiska.
Abaalmarinta BBC ee cayaartooyga ugu wanaagsan sanadkan Afrika ayaa waxaa u codeeyay taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka oo dhan, waxaana ay codeyntu xirantay bishii lasoo dhaafay.
Cayaartahanka ku guuleysta sanadkan – oo noqonaya kii 24-aad taariikhda abaalmarinta – ayaa waxaa la shaacin doonaa saacadu marka ay tahay 1545 GMT, waxaana aad kala socon kartaa BBC World TV, Raadiyaha World Service iyo online-ka.